May 2018 | Londoloza Isitimela
Inyanga: May 2018
Ikhaya > May 2018
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Ukuze izwe elincane, Belgium inezingozi zayo kwelizinga enkulu isitimela uhambo ngezinkulumo eziningi emehlweni emangalisayo ukubona. Ugu Belgian yindlela enhle yokuphumula nokujabulela ukukhanya kwelanga 65 amakhilomitha ugu, kunemisebenzi eminingi ejabulisayo yolwandle…
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi izitimela Swiss kukhona esingcono kakhulu eYurophu ngokuvumelana Boston Consulting Group. Okokuqala nje, Okhahlamba izuzwe izilinganiso okusezingeni eliphezulu naphezu bephonsa izinga. The Swiss lifinyelele 7.2 isilinganiso jikelele aphume 10. ngenkathi Denmark, Finland, naseJalimane zonke lifinyelele 6+ isilinganiso. phakathi…
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Kungashiwo ukuthi Switzerland is kunazo owaziwa ngokuba iziqongo zalo iqhwa ushokoledi okumnandi, kodwa kukhona okuningi kakhulu ukuba ezweni elihle kunokubonwayo. Izincwajana zemininingwane Uhambo eSwitzerland ungomunye yezindlela ezingcono kakhulu ukujabulela emaphandleni enhle….
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Kuhle ukudla ukudla ezitimeleni kukhona namuhla empeleni okumnandi kakhulu. Ngenxa izitimela eziningi zinikeza 5-star yokuhlala nokudla ekilasini lokuqala. Lokhu kuhlanganisa ukudla eyenziwe ezweni labapheki ezidumile. Cishe ujwayele ukufunda ngokudla okumangazayo eziteshini zezitimela noma indawo enhle wena…
The First zemininingwane Trip Ever Made In Italy
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Italy anezinye emangalisayo isitimela uhambo. It has eziningi izitimela amahle iziteshi enkulu kulo lonke izwe, kodwa lapho uhambo lokuqala isitimela eyake yenziwa e-Italy? Le ndatshana ibhalelwe ukufundisa ngeTrain Travel futhi yenziwa ngabakwaSave A…